ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုံခြုံ စိတ်ချရဆုံး မြို့တော်များ | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုံခြုံ စိတ်ချရဆုံး မြို့တော်များ
အလှည်အပတ် ခရီးသွားသည် ဖြစ်စေ၊ အလုပ်သွားလုပ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်နိုင်ငံကနေ တစ်ခြားနိုင်ငံကို သွားပြီးဆိုကတည်းက လုံခြုံ မှုရှိဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုံခြုံ စိတ်ချ ရဆုံး ဖြစ်တဲ့ မြို့တော်တွေကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
မကြာသေးမီက ကြေငြာခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးအရ စိတ်အချ ရဆုံးနိုင်ငံ အဆင့်လိုက်တိုင်း အထူးစိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပြီး လည်ပတ်ဖို့ ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ စီးပွားရေး အချက်အချာ ကျဆုံး မြို့တော် ၅၀ ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး လုံခြုံမှု ၊ အဆောက်အအုံ များ စိတ်ချ ရမှု နှင့် ဘေးကင်း လုံခြုံ မှုရှိခြင်း စသည့်အချက် များပေါ်မူတည်၍ အဆင့်လိုက် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး စီးပွားရေးအရ လုံခြုံ မှုအရှိဆုံး နိုင်ငံ ၁၀နိုင်ငံ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ 1. Tokyo, Japan 2. Singapore 3. Osaka, Japan 4. Stockholm, Sweden 5. Amsterdam, the Netherlands 6. Sydney, Australia 7. Zurich, Switzerland 8. Toronto, Canada 9. Melbourne, Austrelia 10. New York, US